သင့်အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက်အကောင်းဆုံး Booking Engine
Booking Engine အလွယ်တကူပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ် အလားအလာရှိသော guests ည့်သည်များကိုချောချောမွေ့မွေ့ရှာဖွေသောအတွေ့အကြုံရှိစေရန် third-party ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူ။ သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာသည်သင်၏စကားဝိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိုနောက်အဆင့်သို့ရောက်စေရန်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းစာရင်း ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့် OTAs ကော်မရှင်များသည် ၂၀% အထိမြင့်မားနိုင်သဖြင့်အားလပ်ရက်အငှားစာချုပ်မန်နေဂျာ၏ ၀ င်ငွေ၏ ၅၀% ခန့်နှင့်ညီမျှသောကြောင့်ဤလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ရရှိသောကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်းသည်အလွန်အကုန်အကျများပါသည်။ ကာလတိုငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်သည်ကော်မရှင်တွင်ပေးသောငွေပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်လိုသည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်၌ကိရိယာအချို့ရှိရန်လိုအပ်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသောတိုက်ခန်းပံ့ပိုးသူများကတိုက်ရိုက်စာအုပ်များယူရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ထောင်ထားသည့်တိုင်သူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင်လူနေမှုနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုနှုန်းမရှိသောကြောင့်စုံစမ်းရေးအခြေခံအပေါ်အခြေခံသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ချက်ချင်းဘွတ်ကင်ဘွတ်ကင်လုပ်လေ့ရှိသော who ည့်သည်များသည်အိမ်ရှင်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အလားတူအတွေ့အကြုံကိုမျှော်လင့်ကြသည်။
သင့်အားတိုက်ရိုက်နှုန်းထားများနှင့်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ကို အသုံးပြု၍ ရနိုင်မှုကိုပေးသည့် software ပံ့ပိုးသူများစွာသည် အင်ဂျင်ကို အချို့သောအခြေခံအင်္ဂါရပ်များကင်းမဲ့နေသည်။ ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်အချို့သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်တွင်တည်ရှိနေပုံရသည်။ အခြားသူများက Multi- ယူနစ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်။ ဤဘွတ်ကင်အင်ဂျင်အများစုသည် city ည့်သည်သည်မြို့တစ်မြို့ထက်ပိုမိုသောအိမ်ခြံမြေများရှိနိုင်သောအားလပ်ရက်အငှားအိမ်ရှင်၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဗဟိုမှရှာဖွေရန်ခွင့်မပြုပါ။ ထို့အပြင် Google Analytics သို့မဟုတ် Google Tag Manager မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာနှစ်ခုမှတဆင့်သင့်တော်သောခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသူကိုရှာဖွေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Zeevou ရဲ့ Booking Engine ကဘယ်လိုကူညီနိုင်လဲ။
Zeevou မှာတိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာငါတို့နားလည်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအကောင်အထည်ဖော်ရေးပဲ တိုက်ရိုက်စာအုပ်တော်လှန်ရေး! ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် the ည့်ဝတ်ကျေပွန်မှုလုပ်ငန်း၌သိသာထင်ရှားသောအလုပ်များကိုလုပ်နိုင်သည့်အရိုးရှင်းဆုံးကိရိယာများကိုပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုထားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် sizes ည့် ၀ တ်ကျက်စားသူများအားအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်ကိရိယာများကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ငွေပေးချေသောကြားခံ၏မလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့ရရှိသောကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းအချိုးအစားကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ဘွတ်ကင်သည်ဤကတိကဝတ်ကိုသက်သေထူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်သည်လူကြိုက်များနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကိုဆွဲယူနိုင်သည်။ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ခြင်းမှဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တက်ကြွသောစျေးနှုန်းတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့ခြင်းမှဖြစ်စေ ပေါင်းစည်းမှုမိတ်ဖက်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံတကာတွင်အလုပ်လုပ်သောအိမ်ရှင်များအတွက်သတင်းကောင်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်သည်ငွေကြေးပေါင်းစုံတပ်ဆင်မှုများကိုပင်ထောက်ပံ့သည်။ ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
Zeevou အပေါင်းအဖေါ်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် add-ons တွေကို အပိုဆောင်းထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်နှင့်နှုန်းထားအစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဤထုပ်ပိုးရန်။ Host သည် OTAs များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအထူးသီးသန့်အပေးအယူလုပ်ရန်အတွက်နှုန်းထားအစီအစဉ်ကိုကြိုတင်ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်သို့သာရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ Zeevou ကမင်းကို set up လုပ်ခွင့်ပေးတယ် ပရိုမိုးရှင်းနှင့်တွဲဖက် ဘောက်ချာကုဒ်များ လုံးဝအခမဲ့ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်မှတဆင့်အသုံးပြုခံရဖို့။
Zeevou ၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်၏ထူးခြားချက်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်နှင့်သင်ပေါင်းစည်းနိုင်သည် Google Analytics အသွားအလာနှင့်လူ ဦး ရေအချိုးအစားကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်။ ဤသည်ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအတွက်ကူညီနိုင်ပါတယ် of သင့်ရဲ့အလားအလာဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်း။ ထိုမှတပါး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါင်းစည်းမှု Google က Tag ကို Manager က ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်သူတို့လက်ခံရရှိသောကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းများမှစီးဆင်းမှုကိုခြေရာခံရန် Zeevou ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်ကိုအိမ်ရှင်များအားခွင့်ပြုသည်။ PPC-Pay အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်သင်၏ပြန်လည် ၀ င်ငွေကိုတွက်ချက်ရန်ကြိုးစားရာတွင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။ ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာလှုပ်ရှားမှုများ.
ဘွတ်ကင်ထားဖို့ဆိုတာလုံးဝရှင်းပါတယ်။aည့်သည်လုပ်ရမည့်အရာမှာသူတို့၏ပထမအမည်၊ နောက်ဆုံးနာမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်ဆန္ဒရှိပါကဘွတ်ကင်ပြုလုပ်ရန်သူတို့၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းတောင်းခံနိုင်သည်။ ကြိုတင်မှာကြားထားစဉ် the ည့်သည်ထံမှတောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော guests ည့်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုသင်တတ်နိုင်သမျှဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Zeevou ရဲ့ Booking အတည်ပြုခြင်းအဆင့် ၅ ဆင့် GDPR နှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသဘောတူညီချက်စုဆောင်းခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ လုံခြုံရေးသိုက်များနှင့် ID ကိုစစ်ဆေးခြင်းတို့ကိုဂရုမစိုက်ဘဲကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသောကြောင့် the ည့်သည်များအားခံစားစေသည်။
အခမဲ့နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိသောသူတို့အဘို့ တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်က်ဘ်ဆိုက် Zeevou မှကမ်းလှမ်းထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ဘွတ်ကင်စက်ကိုတတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Zeevou ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်aWordPress ဝစ်ဂျက်များသာမက ၀ က်ဘ်ဆိုက်အများစုတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည့် iFrame အပြင်၎င်းမှထောက်ပံ့ပေးသောအရာများပါဝင်သည် Wix။ ဤသည် Zeevou ဘွတ်ကင် guests ည့်သည်များချောချောမွေ့မွေ့လမ်းကြောင်း အင်ဂျင်ကို နှင့် guests ည့်သည်များအနည်းငယ်ကလစ်နှင့်အတူဘွတ်ကင်ထားရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
Zeevou ၏ဘွတ်ကင်အင်ဂျင်၏အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားစေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်နာကျင်မှုကင်းမဲ့သည်။ အားဖြင့် အခမဲ့သရုပ်ပြတောင်းဆိုခြင်း, သင်သည်အခြားစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မည် အင်္ဂါရပ်များ Zeevou မှသင်၏စီးပွားရေးကိုဤယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးကွက်တွင်နေရာရရန်ကူညီသည်။ အဲဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ ထောက်ခံမှုအသင်း သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင့်အားကူညီရန်ဤနေရာတွင်ရှိပါသည်။